Wardiilee Islaaydii keessaa Dabalatee
Wardiilee Islaayidii keessaa Dabalatee
Man'eewwan wardii gara Impress islaayidoota ykn fuuloota fakkassatti saaguuf, tooftaalee garagaraa fayyadamu dandeessa:
Gabatee xabboo - deetaa gara mandheetti itti galchitu fi kutaa saxaxaa gabatee heertaa hojii irra jiruu fayyadamuun kan dhangii barreedaaratti fayyadamtuu saagi.
Gabatee haaraa yookin faayilii amma jiruu gara wanta OLE tti saagi - deetaa amayyaattiif, akka geessituu ammaatti wardii faayilii keessatti kan saagamuu, faayiliitti kornyeessi qindeessu dandeessa
Gabatee jalaqabaa saagii
Gara Impress islaayidiitti ykn fuula fakkassa, iddoo gabatee itti saaguu barbaadduutti deemi.
Gabatee saaguuf Saagi - Gabatee fili, ykn kamshaa durtiirraa sajoo gabatee fayyadami.
Gabaticha lama-cuqaasitii, man'eetti deetaa galchi ykn maxxansi.
Baafata haalqara bauuf madhee lama-cuqaasi, waa'ee qabeentootaa ilaallatee ajajoota dabalataa fili.
Baafata haalqara gabatichaa bauuf, haandaaraa gabatichaa mirga-lama-cuqaasi. Ajajoota kanneen biroo keessaa tarjaalee fi tarreewwan saaguuf ykn haquuf, baafata halqaraa fayyadami.
Man'ee tokko tokkoo filachuu fi mirga-cuqaasuu galuumsa baafata banuuf, iddo ati itti saaguu yookan haquu tarree fi tarjaa ajaja garagaraa keessatti.
Bal'ina man'ee reektaangilii filuuf, qaphxiin man'ee xiyyoo reektaangilii, hantuuttee gaqabuun fi hantuuttee kallattii faallaa xiyyoo reektangiliitti dhiibuun, hantuuttee galakkisuu.
Man'ee tokko filachuuf, qaphxiin man'ee sanii, qabduu hantuuttee gaqabuun fi hantuuttee man'ee itti aanutti dhiibuun, isaan booda hantuuttee gallakisuu.
Wardiilee haaraa akka OLE tti saaguu
Wardii Calc LibreOffice duuwwaa akka wanta OLE tti gara islaayidiitti dabaluu dandeesa.
Iddoo wardii saaguu barbaaddutti gara islaayidiitti deemi.
Saagi - OLE - Wanta fili. Haaraa uumi cuqaasiitii wardii LibreOffice fili. TOLE cuqaasi. deetaa kee galchuuf wardii keessatti cuqaasii.
Islaayidii mul'isuuf wardiilee alatti cuqaasi.
Hamamtaa man'ee osoo hin jijjiiriin hamamtaa wardii jijjiiruuf, wardiicha lama-cuqaasi. Hamamtaa man'ee wardiichaa jijjiiruuf, wardii cuqaasi kana booda qabannoo xiyyoo harkisii.
Faayillii irraa wardii saaguu
Yemuu wardii amma jiru gara islaayidiitti saagu, jijjiiraan wardii jalqabaaratti taasifame islaayidii keessatti hin haromfamu. Garu wardii islaayidii keetti irratti argamu jijjiirama taasiisuu ni dandeesa.
Saagi - Wanta - Wanta OLEfili.
Faayilii irraa Uumi filitii Barbaadi cuqaasi.
Faayillii saaguu barbaaddu mul'isi, kana booda TOLE cuqaasi.
Wardiileen martii islaayidii keeti keessatti saagamuu. Yoo wardii agarsiifame jijjiiru barbaadde, wardiicha lama-cuqaasii, kana booda wardiilee garagaraa fili.
Dhangii - Teessuma Islaayidii
Saagi - Wanta - Wanta OLE
Title is: Wardiilee Islaaydii keessaa Dabalatee